Norway waxay soo afjartay dhammaan xannibaadihii COVID-19, waxay ku soo noqotaa nolol caadi ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » News » Norway waxay soo afjartay dhammaan xannibaadihii COVID-19, waxay ku soo noqotaa nolol caadi ah
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Wararka Norway • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Go'aanka dowladda ee ah in laga saaro xannibaadaha adag ee COVID-19 wuxuu imaanayaa 561 maalmood ka dib markii ugu horreysay ee la soo bandhigay si loo yareeyo faafitaanka coronavirus, iyadoo mas'uuliyiinta caafimaadka ee Noorway ay sidoo kale siinayaan iftiinka cagaaran xayiraadaha kale, sida kuwa ku yaal goobaha isboortiga iyo safarka si loo dhammeeyo toddobaadyada soo socda.
Norway ayaa “ka saari doonta inta badan tallaabooyinka xakamaynta caabuqa,” iyada oo siin doonta “mahad weyn” muwaadiniinta sida ay u hoggaansameen.
In kasta oo tallaabooyinka la qaadi doono 24 -ka saac ee soo socota, haddana Raiisul Wasaaraha Norway wuxuu ku boorriyay ganacsiyada inaysan bilaabin u diyaargarowga macaamiisha si ay u soo noqdaan illaa berri.
Si kastaba ha ahaatee, sarkaalka Norwey wuxuu ku boorriyay muwaadiniinta u qalma inay hubiyaan in si buuxda loo tallaaley, isagoo ku tilmaamay inay tahay "waajibaadkooda madaniga ah".
Norway ayaa si buuxda dib u furi doonta Sabtida, Sebtember 25, taasoo soo afjaraysa xannibaadaha COVID-19 ee ganacsiyada iyo is-dhexgalka bulshada, Raiisul Wasaaraha dalka ayaa maanta ku dhawaaqay.
Raysalwasaaraha Norway Erna Solberg
"Hadda waxaan ku laabaneynaa nolol maalmeedkii caadiga ahaa," ayay ra'iisul wasaaraha Norway Erna Solberg ku dhawaaqday, iyadoo ka hadlaysay shir jaraa'id oo rasmi ah maanta.
Maanta, Solberg wuxuu si adag u sheegay in, laga bilaabo 4pm (3pm GMT) berri (Sabtida, Sebtember 25), Norway wuxuu “ka saari doonaa inta badan tallaabooyinka xakamaynta caabuqa,” isagoo siinaya “mahad weyn” muwaadiniinta sida ay u hoggaansameen.
In kasta oo tallaabooyinka la qaadi doono 24 -ka saac ee soo socda, Raiiselwasaaraha Norway wuxuu ku boorriyay ganacsiyada inaysan bilaabin u diyaargarowga macaamiisha inay soo laabtaan illaa berri, maadaama xeerarku ay weli jiraan illaa “waqtiga caadiga ah” ee lagu heshiiyay.
In kasta oo mas'uuliyiinta Norway ay dareemayaan raaxo ku filan oo ay ku bilaabi karaan dib -u -furitaanka dalka, sarkaalka ayaa ku boorriyay muwaadiniinta u qalma inay hubiyaan in si buuxda loo tallaalo, isagoo ku tilmaamay inay tahay "waajibaadkooda madaniga ah" isla markaana ay codsi u dirayaan "bulshooyinka laga tirada badan yahay" ee aan weli tallaalka qaadin.
Isagoo ka jawaabaya ogeysiiska, madaxa Xiriirka Shirkadaha Norway, Ole Erik Almlid, wuxuu ku dhawaaqay in tani ay tahay waxa “bulshada oo dhan ay u oomaneyd,” in kastoo “xariiqa dhammaadka aan weli la gaarin,” iyada oo ay harsan tahay shaqo dheeri ah ilaa warshaduhu si buuxda u soo kabanayaan.
Kevin Deeb wuxuu leeyahay,
Nofeembar 23, 2021 at 06: 01
Hadda waxaa la gaaray waqtigii lagu soo laaban lahaa nolol maalmeedka caadiga ah, "Ra'iisul 76% dhammaan dadka Norway waxay hadda heleen ugu yaraan hal dose oo ah COVID-19. Wadamo dhowr ah ayaa dhawaan soo sheegay tirooyinka maalinlaha ah ee ugu sarreeya. Mudaaharaad iyo qalalaase.